राम्रो मौखिक स्वच्छता कायम गर्न के के विधिहरू छन् - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फेब्रुअरी 23, 2021 फेब्रुअरी 22, 2021 हव्वा एन्डरसन ब्लग, विशेष समाचार, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य
फ्लोसिंग गाह्रो र थकाइलाग्दो हुन सक्छ तर यसको मतलब तपाईंले हरेस खानु हुँदैन।
तपाईंको टूथब्रशमा नरम ब्रस्टलहरू हुनुपर्दछ।
तपाईको टुथपेस्टको सब भन्दा महत्वपूर्ण तत्व फ्लोराइड हो।
दिनमा दुई पटक दाँत माझ्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
दाँतहरू बीच ब्याक्टेरियाहरू, पट्टिका, र खाद्य निर्माण गर्न हटाउन फ्लस प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै दन्त चिकित्सकहरूले यो दाबी गर्छन् फ्लोसिingले तपाईंको मौखिक स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउँछ धेरै तरीकाले। यसले पट्टिका हटाउनका साथै दाँत क्षय, जिing्गिभाइटिस, र गम रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अब, फ्लोसिing गाह्रो र थकाइलाग्दो हुन सक्छ तर यसको मतलब तपाईंले हरेस खानु हुँदैन। उपकरणहरू खोज्नुहोस्, जस्तै अन्तर्देशीय ब्रशेस, जसले प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँदछ र यसलाई अझ रमाइलो बनाउँदछ।
२ दैनिक दुई पटक दाँत माझ्नु
दाँत सफा गर्दै दिनको दुई पटक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ दाँतहरू ठीक तरीकाले कसरी ब्रश गर्ने बारेमा केहि सुझावहरू छन्:
टुथब्रशलाई गम लाइनतर्फ 45--डिग्री कोणमा लक्ष्य राख्नुहोस्।
टूथपेस्टको मटर आकारको मात्रा प्रयोग गर्नुहोस्।
गम लाइनमा फोकस गर्नुहोस् किनकि प्लेक जहिले पनि यस क्षेत्रतर्फ जान्छ।
एक गोलाकार गति मा दांत बिस्तारै ब्रश।
Soft. सफ्ट ब्रिस्टलको साथ टूथब्रस छनौट गर्नुहोस्
तपाईंको टूथब्रशमा नरम ब्रस्टलहरू हुनुपर्दछ। कडा ब्रिस्टल्सको परिणामस्वरूप गम र क्षतिग्रस्त तामचीनी फेर्न सक्छ। यसैले, तपाईंको दाँतको जरा उजागर हुन्छ र गर्मी र चिसो प्रति बढी संवेदनशील हुन्छ।
टूथब्रशको टाउकोको आकार पनि सानो हुनु पर्छ। यो सजिलै मुख मा फिट हुनेछ र एक पटक मा एक दांत ब्रश।
A. एक फ्लोराइड टूथपेस्ट प्रयोग गर्नुहोस्
टुथपेस्ट छनौट गर्दा, हामी प्राय: स्वाद र सेतोनिंगमा ध्यान केन्द्रित गर्दै गल्ती गर्छौं। तपाईको टुथपेस्टको सब भन्दा महत्वपूर्ण तत्व फ्लोराइड हो।
यो पदार्थ दाँत क्षय बिरूद्ध रक्षा गर्न महत्वपूर्ण छ। यसले तपाइँको दाँतहरूको लागि एक सुरक्षा अवरोध सिर्जना गर्दछ र तिनीहरूलाई मजबूत गर्दछ।
Your. तपाईको दन्त चिकित्सकको नियमित भ्रमण गर्नुहोस्
नियमित दन्त जाँच र सफा तालिका बनाउनुहोस्। तपाईंको दन्त चिकित्सकले तपाईंको मौखिक स्वास्थ्य अनुगमन गर्दछ र निर्धारण गर्दछ कि तपाईंको दाँत भर्नु आवश्यक छ कि छैन।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एक दन्त चिकित्सकले तपाईंलाई उत्तम मौखिक स्वच्छता उपकरणहरू र अभ्यासहरूमा क्रियात्मक सुझावहरू प्रदान गर्दछ। यसैले तपाईं जहिले विश्वास गर्नुहुन्छ दन्त चिकित्सक छनौट गर्नुहोस्।
दाँत दुखाई भएमा दन्त जाँचमा ढिलाइ नगर्नुहोस्। दाँत संक्रमण अन्य क्षेत्रहरूमा छिटो फैलिन सक्छ, जस्तै तपाईंको ब j्गारा हड्डी, अनुहार, घाँटी, र टाउको समेत। यदि तपाईंसँग निम्न लक्षणहरू छन् भने तपाईंले कल गर्नु पर्छ आपतकालीन दंत चिकित्सक तुरुन्त:
दाँत दुख्ने कुरा एक दिन भन्दा लामो हुन्छ
काट्नु वा चबाउँदा पीडा
जब ब्रिस्टल्सले कठोर हुन थाल्छ, तिनीहरूले प्रभावशीलता गुमाउँदछन्।
Your. तपाईंको टूथब्रश नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस्
जब तपाईंको टूथब्रशमा ब्रिस्टलहरू सिधा र नरम हुन्छन्, तिनीहरू तपाईंको मुखमा सानो खाली स्थानहरू नेभिगेट गर्न सजिलो हुन्छ। तिनीहरूले खाना र ब्याक्टेरिया हटाउन सक्छन्।
त्यसकारण, जब ब्रिस्टल्सले कठोरता खोल्न सुरू गर्दछन्, तिनीहरूले प्रभावकारिता गुमाउँनेछन्। त्यो जब तपाईं गर्नुपर्छ तपाईंको पुरानो टूथब्रश बदल्नुहोस् तुरुन्तै।
यदि तपाईं इलेक्ट्रिक टुथब्रश टाउको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसलाई हरेक १२ हप्तामा बदल्नुहोस्। तिनीहरूको ब्रिस्टल छोटो छ, जसको अर्थ तिनीहरू प्राय: छिटो हुन्छन्।
कम प्रभावकारिता बाहेक, पुरानो टुथब्रसले पनि भाइरल र ब्याक्टेरिया संक्रमण हुन सक्छ।
Smoking. धुम्रपान छोड्ने प्रयास गर्नुहोस्
धूम्रपानले तपाईको दाँतलाई हानिकारक निकोटीनमा पार्छ। नतिजा स्वरूप, यसले दाग लागी, पहेंलो दाँत र सास फेर्छ।
अब, त्यहाँ धेरै उपचारहरू छन् जुन तपाईं दाँत सेतो बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा सास फेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो मुखको स्वास्थ्यमा धूम्रपानको गम्भीर असरहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उदाहरणको लागि, धूम्रपानले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली कम गर्दछ मौखिक क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ।
धूम्रपानले गम (पीरियडोन्टल) रोगलाई पनि निम्त्याउँछ, संक्रमण जसले तपाईंको गम लाइनलाई असर गर्दछ। यो तब हुन्छ जब टार्टार र ब्याक्टेरियाहरू तपाईंको गमको मुनि वा माथि बढ्छ र सूजनको कारण गर्दछ। धूम्रपान गम रोगसँग सिधा सम्बन्धित छ। निकोटीनले तपाईंको मुहारमा जमिन लिनको लागि टार्टर र ब्याक्टेरिया सक्षम पार्छ।
अब, यदि तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि इ-सिगरेट तपाईको स्वास्थ्यको लागि स्वस्थ छन्, तपाई गलत हुनुहुन्छ। जबकि उनीहरूले धुवाँ उत्पादन गर्दैनन्, तिनीहरू अझै निकोोटिन समावेश गर्दछ। थप रूपमा, वाष्पले रसायनिक र भारी धातुहरूको एक विस्तृत श्रृंखला समावेश गर्दछ जुन तपाईंको मौखिक र सामान्य स्वास्थ्य दुवैको लागि खराब हो।
राम्रो मौखिक स्वच्छता कायम राख्नु आवश्यक छ
उचित मौखिक स्वच्छता बिना, ब्याक्टेरिया तपाईंको मुखमा स accum्कलन गर्न सक्दछ र दाँत क्षय, गम रोग, र बहु ​​मौखिक संक्रमण निम्त्याउन सक्छ। यसैले तपाईंले आफ्नो दन्त स्वास्थ्य नियमित राख्नु पर्छ।
जबकि ती सबै मौखिक स्वच्छता सुझावहरूको निश्चित सूची होईन, यो ठोस सुरुवात विन्दुको रूपमा काम गर्दछ। थप सल्लाह र अन्तर्दृष्टिका लागि, आफ्नो दन्त चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
सांप्रदायिक समाचार तरिका मौखिक स्वच्छता
म बजार विशेषज्ञ ब्ल्गर बनेको छु। खेल र रुचिकर यात्रा गन्तव्यहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ। मानिसहरूलाई जानकारी दिन सक्ने सामग्री साझेदारी गर्न मनपराउँदछ।